ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများက၎င်းကိုမရရှိနိုင်ကြောင်းမန်ချက်စတာလိင်ကုထုံးဖြစ်သည့် Your Brain On Porn မှသတိပေးသည်
တစ်ဦးကမန်ချက်စတာ-based psychosexual ကုထုံးညစ်ညမ်းစွဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံကျန်းမာ, လူပျိုများအရေအတွက်မြင့်တက်လာစေသည်ဟုသတိပေးလိုက်သည်။
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှန့်အသတ် access ကိုအတူတက်စိုက်ပျိုးကြသူယောက်ျား၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုထိခိုက်စေမယ့်အတော်လေးသစ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအများဆုံးနှိုးဆွဖို့တားမြစ်ခြင်းမရှိသော access ကိုထားရှိခြင်းသည် psychosexual ကုထုံး Janet ဒနှင့်အညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တဲ့အရေအတွက်ကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
"ဟုအဆိုပါ porn အသုံးပြုသူရုံတော့ဘူးအလုံအလောက်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေရှည်မိတ်ဖက်ခံရစေခြင်းငှါ, လိင်နှင့်အတူ" ဟုသူမကရှင်းပြသည်။
PIED ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူရုန်းကန်လူတို့သညျရာပေါင်းများစွာစွဲဖိုရမ်များပေါ်မှာဤအတိအကျပြဿနာကြုံနေရအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ - hits သန်းပေါင်းများစွာတစ်ရက်မြေများပျက်စီးနေပါသည်အချို့သောအရာ၏။
သူ၏အတွေ့အကြုံများကိုဖိုရမ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး က“ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေကကျွန်မရဲ့ 'ဆင်းရဲတဲ့သူငယ်လေး' ကိုအာရုံစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းချောမွေ့နေပြီးကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲအမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမဖြစ်စေသောအရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ "
နောက်ထပ်အချင်းလူသား, အသက် 22, said: "ငါသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အဆက်မပြတ်ခြိမ်းခြောက်မှုငါ့ကိုကျော်စိတ်ပျက်ဖွယ်မိသောကြောင့်ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံအကြောင်းကိုဦးနှောက်အာရုံကြောရလေ့ရှိတယ်။ "
“ ကျွန်မသူမရဲ့တိုးတက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ပြီးလိင်အကြောင်းဘာကြောင့်မပြောနိုင်တာလဲလို့ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိတယ်၊ ငါအဲဒီနေ့မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးပြီ၊ စိတ်ဓာတ်မကျဘူး၊ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အရှက်ကွဲခြင်း, အရှက်နှင့်အမျက်။ "
လုလင်တစ်ဦးကမြင့်တက်အရေအတွက်ကထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ Viagra မှလှည့်ကြသည် - ဒါပေမယ့် PIED အတူပြဿနာကဦးနှောက်ထဲမှာစတင်ကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်ပုံကိုမကြာခဏအသုံးထေူ၏။
"ဒီပြဿနာကြောင့် dopamine ဖြစ်ပါသည် - ဟော်မုန်းဖြန့်ချိပျြောမှေ့စပြည်နယ်ကြောင်းဖွကြောင်း - ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ်ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကအစပျိုးမှ desensitized ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်" ဟု Janet ကရှင်းပြသည်။
ကျနော်တို့ကိုအ excites တ image ကိုတနေ့မြင်အဖန်ဖန်ကပြန်လာစေခြင်းငှါ, ", သာထို့နောက်ကျွန်တော်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကို excite တော်မမူကြောင်းကိုရှာပါ။
"ငါသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ထပ်ခါထပ်ခါ porn ဆိုက်များပြန်လာတွေ့ပါ, နေသော်လည်းသတိရှိရှိ porn သုံးစွဲဖို့လိုမရသူအများအပြား clients များ, ကိုမြင်ရပါတယ်။ "
အသုံးပြုသူများသည်အတူတူပင် '' မြင့်သော '' အောင်မြင်ရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုရှာကြံတက်အဆုံးသတ်နှင့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသနမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့နှိုငျးခဲ့သညျ။
"ငါကပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပေမယ့်အမှန်တရားငါ dopamine junkie ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ": သည်သူ၏အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းတစ်ခုမှာ 20 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားသည်ဟုဆိုသည်
"သင် watch ပို porn, ပိုငျသညျလိုအပျနှငျ့သငျအပြည့်အဝနှိုးဆော်ခြင်းခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပိုအမာခံ porn ။ "
"ငါ့အဆိုးဆုံးမှာကျွန်မရံဖန်ရံခါ bestiality, မကြာခဏသှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျးမြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်း၏အမြဲအခြားအမာခံအမျိုးအစားသို့ dabbling ခဲ့ပါတယ်။ "
ကြီးမြတ်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိုအပ်ကြောင်းဦးနှောက်ရဲ့အပျြောအပါးစင်တာကို real-ဘဝမိတ်ဖက်နှင့်အတူ arousal နှင့် erectile ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, 'ပုံမှန်' 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှ numbed ဖြစ်လာဆိုလိုသည်။
"ဒါဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ထံမှဆုတ်ခွာဖြစ်လာစေရန်နှင့်လုံးဝလိင်ကိုရှောင်ကြဉ်စေခြင်းငှါဒါရုံကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိကြသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူရင်းနှီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်၏စိတ်ကူးထိုသူတို့အဘို့ '' တော့ဘူးလုပ်မထားဘူး '' ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" Janet ဆက်ပြောသည်။
အွန်လိုင်းမိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေအတော်များများယောက်ျားသူတို့ရဲ့စွဲလမ်း, အထီးကျန်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် unconfident ခံစားရရန်သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏ကြောင်းရှင်းပြအလားတူကိစ္စများ၏ပြောပြီ။
"သူတို့ကတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်ခြင်း၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကအဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးရှုံး - လိင်စိတ်၏သဘာဝဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှု, တစ်ဖက်၏ရငျးနှီးမှုနှင့်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်လိင်ထိုသူတို့အဘို့အကြောင်းကိုတကယ်ကဘာလဲဆိုတာမေ့လျော့" Janet သွားလေ၏။
"ဒါဟာတဦးတည်း bonding အစားတစ်ဦးဝေမျှခြင်းတစ်စက်ရုပ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုမြုံအတွေ့အကြုံ, ဖြစ်လာသည်။ "
ရလဒ်အဖြစ် PIED နှင့်စွဲခံစားနေရပြီးလူတို့သညျအလေ့အကျင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်နဲ့ 'ပြန်ဖွင့်' 'ကိုစတင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားပေးအားမြှောက်ကြသည် - Re-wiring ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစပျိုးခြင်းအားဖြင့်နှိုးဆွခံနေရသို့။
နောက်ကျော-to-အခြေခံအဆင့်တွင်သူများသည်ထိုကဲ့သို့ touch နှင့်အနံ့အဖြစ်ပိုပြီးသိမ်မွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစပျိုးဖို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
မိမိ 'reboot' 'ဖော်ပြတစ်ခုမှာ 19 နှစ်အရွယ်လူကို said: "ပထမရက်သတ္တပတ်ယုံကြည်မှုနှင့်ယေဘုယျပျော်ရွှင်မှုကိုအဖြစ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာစိတျအပွောငျးအလဲလျော့ကျလာ, ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်မတရားသော, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြင်ဦးနှောက်မြူနှင့်အတူအခက်ခဲဆုံးခဲ့ကြသည်။
"ကျနော့် porn-ကြိုး - ယခုချည်း, dopamine-လစ်လပ် - ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ဟာပြီးပြည့်စုံချုံးချုံးကျသွားတယ်ဖို့၌ငါ့ကိုလှည့်။
"ထိုအခါငါအလေးအနက်တိုးတက်မှုအောင်စတင်ခဲ့ပြီး; ရမ္မက်ဆင်းခဲ့ကြသည်, ငါ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တဖြည်းဖြည်းအစားကိုယ့်ကွန်ပျူတာ screen ၏အအေးအလင်း၏, မထိနဲ့အနံ့မှ arousal နှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်သူ့ဟာသူ rewired ။
"ငါ့စိတ်ထဲရှင်းလင်းတယ်အမျှ, ငါ၏ယုံကြည်မှု သာ. ကြီးမြတ်တယ်, ငါ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့။ "
ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တစျခုလုံးကို Self-လေးစားမှု - အတော်များများကအခြားသူများကို '' ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့ 'သူတို့ရဲ့လိင်အသက်ကိုမသာထိခိုက်အဖြစ်ကို' ကို restart '' ခရီးဖော်ပြထားပါပြီ။
"ကောင်းမွန်သောလိင်ပျော်စရာရှိခြင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်လုံခြုံ, မေတ္တာရှင်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သို့မဟုတ်နူးညံ့သောလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျှဝေနိုင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဖွင့်," Janet ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
"ဒါဟာကိုယ့်ကိုသင်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာတွေ့မြင်သောအရာကိုကူးယူအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ "
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, Janet Eccle ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု က်ဘ်ဆိုက်.
မေလ 6, 2014 | Kat Woodcock အားဖြင့်